खुसिको खबर:अब नेपालमा सुरुभयो ४५ वर्षबाट बृद्धभत्ता(सहि वा गलत?) – Nep Stok
मंग्सिर १९, २०७८ आइतबार 419
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने, र एकल महिलाको हकमा ४५ बर्ष मा नै भत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।
जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने । उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्यो । हामीहरु यहाँ (शहर) बसेको को त उपचार गर्न सक्दैनौं । पहाडमा बस्नेले उपचार कसरी पाउँछ? त्यसकारण ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्नपर्यो ‘ सांसद लामाले भने । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।
एक्यूआई एक सय नाघेपछि त्यहाँ मानिसका लागि अस्वस्थ वातावरण भएको मानिन्छ। अहिले तराई क्षेत्रको प्रदूषण झनै बढेको छ । सिमरा र विराटनगरका केन्द्रहरूले एक्यूआई दुई सय नाघेको देखाइरहेका छन् । एक्यूआई दुई सय नाघ्नु अति जोखिमपूर्ण घातक अवस्था मानिन्छ ।
Prevमहिनाको ५० हजार पाएको छु तर ५० लाख लिएको छैन मैले विना सम्पत्ति पति निखिल उप्रेतीजीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुँ : कोपिला उप्रेती
Nextटिकटकबाट करोडौं कमाउने भाइरल मन्दिरा को हुन् ?